နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါသည်? - နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဥပဒေခိုင်မြဲသော - Lawyers in Nigeria.
Lex Artifex LLP, တစ်ဦး နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက် Intellectual Property Law Firm သူတို့ရဲ့ Intellectual Property ကာကွယ်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအထောက်အကူပြုဖို့ IP ကို ​​Helpdesk မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် (အိုင်ပီ) နှင့်၎င်းတို့၏ Intellectual Property ခငြ့်အရေးပြဋ္ဌာန်း (IPR) နိုင်ဂျီးရီးယားတွင်သို့မဟုတ်တွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေတာသည့်အခါ. နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်အကြောင်းကိုဤစာအုပျ: ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုနိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါသည်?
အားလုံးအဖိုးအခကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒေါ်လာ၌ရှိကြ၏ ($) လူအပေါင်းတို့သည်အစိုးရစရိတ်နှင့် / သို့မဟုတ်ရှေ့နေစရိတ်များအားလုံးပါဝင်နိုင်များမှာ.
ITEM ခု DESCRIPTION
အဖိုးအခ $ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ)
ဒီဇိုင်း / ပုံဆွဲ / လိုဂိုရှာရန်
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် / ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသား၏မှတ်ပုံတင်လျှောက်လွှာ
ကုန်အမှတ်တံဆိပ် / ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသား၏နှောင်းပိုင်းတွင်သက်တမ်းတိုးဘို့ပြစ်ဒဏ်
အဆိုပါမှတ်ပုံတင်အပေါ်သည်အခြားပုံစံသို့မဟုတ် entry ကို၏လက်မှတ်စစ်မှန်သောမိတ္တူ
ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်အထူးသ၏ပြုပြင်မွမ်းမံ
ဘာသာပြန်ချက်အခကြေးငွေ (per 100 English သို့နိုင်ငံခြားစကား)
Lex Artifex LLP, တစ်ဦး နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအပြည့်အဝအကွာအဝေးကမ်းလှမ်း, ပိုင်ဆိုင်ခွင့်လက်မှတ်, နှင့်စက်မှုဒီဇိုင်းလျှောက်လွှာပြင်ဆင်မှုများနှင့်တရားစွဲဆိုမှုန်ဆောင်မှုများ. ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ IP ကိုရှေ့နေများပါဝင်သည် & ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုများ၏စီးပွားဖြစ်နှင့်အသိပညာဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများ၏ဘက်တော်သားအတွက်အထူးပြုတဲ့သူရှေ့ရပျ. Lex Artifex LLP နိုင်ဂျီးရီးယား IP ကိုရုံးကလိုင်စင်ဖြစ်ပါသည်.
ယင်း IP ကို ​​Helpdesk အကြောင်းသင်ယူရန်နှင့်ငါတို့သည်အဘယ်သို့နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက် IP ကိုန်ဆောင်မှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီနိုင်ပါတယ်, အီးမေးလ်ပို့ပါ: lexartifexllp@lexartifexllp.com; ခေါ်ဆိုခ +234.803.979.5959.
Lex Artifex LLP ရဲ့ Intellectual Property အလေ့အကျင့် Group မှ